Vietnam Airlines dia manidina ny Dreamliner voalohany an'ny Boeing 787-10
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Vietnam Airlines dia manidina ny Dreamliner voalohany an'ny Boeing 787-10
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Vaovao Mafana Vietnam
Boeing dia nanolotra ny voalohany tamin'ny valo 787-10 Dreamliner fiaramanidina mankany i Vietnam Airlines anio amin'ny alàlan'ny fanofana avy amin'ny Air Lease Corporation. Nikasa ny hametraka ny 787-10 - ilay fiaramanidina kambana faran'izay mahomby indrindra amin'ny indostria - ny zotram-pirenena Vietnamese amin'ny zotra be olona indrindra amin'ny tambajotram-pivelarany.
“Ny fandraisana ny mpikambana lehibe indrindra amin'ny fianakaviana 787 amin'ireo fiaramanidina mitombo dia manome antoka fa manohy mirehareha amin'ny iray amin'ireo fiaramanidina tanora indrindra sy maoderina indrindra any Azia izahay ary manampy ny fifaninanana eo amin'ny asan'ny Vietnam Airlines. Ankasitrahanay ny fahombiazan'ny fahombiazana tsy azo resena amin'ny fihenan'ny fandoroana solika ary ny fampiononana sy fampitaovana miavaka amin'ny mpandeha, ”hoy i Pham Ngoc Minh, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Vietnam Airlines. "Amin'ny diantsika ho lasa kaompaniera 5-kintana, matoky izahay fa ny fiaramanidina Boeing 787-10 dia hampisondrotra bebe kokoa ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny làlan'ny Hanoi mankany Ho Chi Minh ary koa ny zotra iraisam-pirenena maro."
Ny 787-10 vaovao dia hameno ny fiaramanidin'ny Vietnam Airlines misy fiaramanidina 787-9. Samy manasongadina ny haitao mahomby indrindra an'ny Dreamliner sy ny fampiononana mahafinaritra ny mpandeha. Ny 787-10 dia lava kokoa noho ny 787-9, manome toerana hitondrana mpandeha 40 bebe kokoa sy entana maro hafa ary manampy azy io hanolotra ny vidin'ny asa ambany indrindra isaky ny seza misy jet-roa-vaire miasa amin'izao fotoana izao. Vietnam Airlines dia mitafy ny maodely 787-10 misy seza 367 (24 amin'ny sokajy orinasa ary 343 amin'ny sokajy toekarena). Ankoatry ny habeny sy ny fahaizan'ny solika, ny 787-10 dia afaka manarona lavitra. Miaraka amina 6,430 11,910 km (787 km) navoaka marobe, ny 10-95 dia afaka manidina mihoatra ny XNUMX isan-jaton'ny zotram-piaramanidina kambana manerantany.
"ALC dia faly nanambara ity fanaterana 787-10 voalohany manan-danja ity any amin'ny Vietnam Airlines miaraka amin'i Boeing ary izy no voalohany nampiditra ny seranam-piaramanidina ho an'ny -10," hoy i Steven F. Udvar-Házy, Filohan'ny Executive Air Lease Corporation. “Ity voalohany amin'ireo 787-10 an'ny valo izay avy amin'ny ALC dia handray anjara betsaka amin'ny fampiroboroboana ny andian-tsambon'olom-bolo lehibe an'ny Vietnam Airlines miaraka amin'ny teknolojia farany. ALC dia manome lanja ny andraikitray nandritra ny fotoana ela tamin'ny naha-mpanolotsaina anay rehefa manomana ny fitomboana sy ny fanoloana ny fiaramanidina Vietnam Airlines hitazonana ny toerana misy ny zotram-piaramanidina any Azia atsimo atsinanana sy manerantany. ”
Miaraka amin'ny fandefasana any amin'ny Vietnam Airlines, ny 787-10 dia manohy manitatra ny fisiany manerantany. Maherin'ny 30 amin'ity maodely Dreamliner ity dia natolotra amin'ny mpandraharaha enina hatramin'ny nidiran'ny fiaramanidina tamin'ny serivisy tamin'ny taona lasa. Ny fiaramanidina dia manaparitaka ny 787-10 manerana an'izao tontolo izao, indrindra ny any Azia satria izy no manana ny antsasaky ny tanjona 787-10 rehetra.
“Nahazo fitomboana mahavariana ny Vietnam Airlines tato anatin'ny taona vitsivitsy ary nanampy tamin'ny fampitomboana haingana ny sidina ara-barotra any Azia Atsimoatsinanana. Hitanay ny mety ho pototra lehibe kokoa noho izany ary ny 787-10 mitondra fitambarana habe sy fahombiazana tonga lafatra ho an'ny Vietnam Airlines hanaterana zotra be fangatahana, raha ny 787-9 lavitra kosa dia manome fahafaha-mampifandray ireo tanàna lehibe manerantany amin'ny toerana malaza eto Vietnam sy ny firenena manodidina, ”hoy i Ihssane Mounir, filoha lefitra zon'ny Sales Sales and Marketing an'ny The Boeing Company. “Faly izahay hiara-hiasa amin'i ALC indray hitondra fiaramanidina manara-penitra ho an'ny mpanjifa sarobidy. Matoky izahay fa ny 787-10 dia hanampy an'i Vietnam Airlines hanohy hampivoatra ny tambajotram-paritra sy iraisam-pirenena ary hanatsara ny serivisy ahazoana loka. ”
Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fiaramanidina 787, Vietnam Airlines dia mampiasa vahaolana Boeing Global Services toy ny Airplane Health Management (AHM) hahazoana ny angon-drakitra momba ny sidina ary ahafahana mitazona mialoha. AHM dia ampiasain'ny Boeing AnalytX, fanangonana rindrambaiko sy serivisy fakan-kevitra izay manova ny angon-drakitra ho lasa fahombiazana bebe kokoa mandritra ny dingana sidina rehetra.